Somali News 03.22.2021 | KWIT
Somali News 03.22.2021
By Halima Osman • Mar 22, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay muujineysaa ku dhowaad nus malyuun reer Iow ah inay heleen tallaalka COVID-19.
Gudoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa rajeynaya inuu u furo talaalada qofkasta oo jira 16 iyo wixii ka weyn horaanta bisha Abriil.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay furitaan khadka tooska ah ah oo loogu talagalay xarumaha tallaalka ee COVID-19 oo loo qorsheeyay Isniinta soo socota iyo Talaadada dadka degan Degmada Woodbury ee Xarunta Dhacdooyinka Tyson.
Nebraska wali waxay qorsheyneysaa inay ka dhigto talaalka coronavirus-ka dadweynaha si ay u helaan dadweynaha dhamaadka bisha Abriil ama horraanta bisha May, laakiin Guddoomiyaha Pete Ricketts wuxuu leeyahay arrimo badan ayaa beddeli kara jadwalka gobolka.
Nebraska waxay hada diirada saareysaa talaalka dadka degan 50 ilaa 64 jir iyo dadka qaba xaalado caafimaad oo salka ku haya.
Tobanaan kun oo qof oo dheeri ah oo ku nool Koonfurta Dakota ayaa xaq u leh tallaalka laga bilaabo maanta. Wasaaradda Caafimaadka ee gobolka ayaa tallaal u furtay koox kale oo ahmiyad gaar ah leh. Tallaabadan waxaa ka mid ah shaqaalaha dab-damiska iyo cuntada, beeraha, iyo shaqaalaha gaadiidka. Waqtigan xaadirka ah, 37% Koonfurta Dakota waxay heleen uguyaraan hal qiyaas, halka kudhowaad rubuc si buuxda looga talaalay COVID-19.
Caawa, Golaha Sioux City Community School ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan wareegga kale ee maalgelinta COVID-19. Jimcihii, Waaxda Waxbarashada ee Iowa waxay ku dhawaaqday in gobolka loo qoondeeyay inuu helo ku dhowaad $ 775 milyan oo gargaar federaal ah oo loogu talagalay dugsiyada iyada oo loo marayo sanduuq si wax looga qabto kharashaadka sababo masiibada.
Mid ka mid ah xubnaha guddiga dugsiga ayaa u sheegaya Siouxland Public Media, degmada dugsiga ayaa laga filayey inay hesho $43 milyan oo dheeraad ah oo gargaar ah wadar ahaan $ 63.3 milyan.
Somali News 03.18.2021
By Halima Osman • Mar 18, 2021
Talaalada ayaa kusii socda Iowa iyadoo waaxda caafimaadka bulshada ee Iowa ay soo tabinayso sagaal kale oo COVID-19 ah iyo 404 kiis oo kale oo la xaqiijiyay maanta. Degmada Woodbury, waxaa jiray 25 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta 24-kii saac ee la soo dhaafay.